फिफाको विश्व वरियतामा दुई स्थान माथि उक्लियो नेपाली महिला फुटबल टोली – Khel Dainik
फिफाको विश्व वरियतामा दुई स्थान माथि उक्लियो नेपाली महिला फुटबल टोली
काठमाडौं (खेलदैनिक) । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली फिफाको विश्व वरियतामा दुई स्थान माथि उक्लिएको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले शुक्रबार निकालेको नयाँ वरियतामा नेपालले दुई स्थान सुधार गर्दै १०२औं स्थानमा उक्लिएको हो ।
दक्षिण एसियामा भने भारत पछि नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । विश्व वरियताको ५७औं स्थानमा रहेको भारत दक्षिण एसियातर्फ शिर्ष स्थानमा छ । त्यस्तै १३०औं वरियतामा रहेको बंगलादेश दक्षिण एसियातर्फ तेस्रो स्थानमा छ भने १३६औं वरियतामा रहेको श्रीलंका दक्षिण एसियातर्फ चौथो स्थानमा छ ।
१३९औं स्थानमा रहेको माल्दिभ्स दक्षिण एसियातर्फ पाँचौ. स्थानमा रहँदा १४५औं स्थानमा रहेको अफगानिस्तान दक्षिण एसियातर्फ छैठौं स्थानमा छ । त्यस्तै १५४औं स्थानमा रहेको भुटान भने दक्षिण एसियातर्फ पुछार तथा सातौ. स्थानमा रहेको छ ।
त्यस्तै भर्खरै फ्रान्समा सम्पन्न फिफा महिला विश्वकपको उपाधि लगातार दोस्रोपटक जितेको अमेरिका विश्व वरियताको शिर्ष स्थानमा छ । जर्मनीले दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ भने नेदरल्याण्डस तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
← काठमाडौँ जिल्ला लिग : सेमिफाइनल समिकरण पूरा प्रदेश १ लिगको फाइनल चरणका खेलहरु शुरु, धरानको बिजयी शुरुवात →
सपना स्कुल र ब्लु बर्डको जित असार २७, २०७६
नेत्रहीन क्रिकेट उपाधि बाग्मतीलाई असार २७, २०७६
पिस युनाइटेडलाई फुटबल उपाधि असार २७, २०७६
चन्दन र राजेन्द्रलाई सफलता असार २७, २०७६
ग्रिष्मालाई एनआरएस फुटसल उपाधी असार २७, २०७६
रोहितले पाए नयाँ क्लब असार २७, २०७६